Tinye: GoGettaz Agripreneur Nrite Maka Ndị Na-eto Eto Africa ($ 50,000 Ego)
Ebe E Si Nweta: genafrica.org
Ọ bụrụ n ’ịbụ onye agripreneur nke Africa na-achọ iwere azụmahịa gị n’ọkwa ọzọ, GoGettaz Agripreneur Nrite asọmpi nwere ike ịbụ ihe ịchọrọ.
A na - emeghe akwụkwọ maka ndị agripreneurs kacha mma na nke kachasị mma n'Africa bụ ndị na - edozi nnukwu nsogbu chere sistemụ nri Afrịka na - ewusi ọrụ ugbo na azụmaahịa nri na obodo ha.
GoGettaz Agripreneur Nrite
GoGettaz Agripreneur Prize bụ asọmpi kwa afọ nke Generation Africa haziri site na mmekorita ya na Econet, ụlọ ọrụ nkwukọrịta nkwukọrịta na teknụzụ nke mba niile, na Yara International, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe ọkụkụ ụwa na Norway.
Amalitere na 2019, ihe omume Africa lebara anya bụ iji wulite usoro okike maka ndị ọchụnta ego na-eto eto na mpaghara nri nri na mpaghara Afrika. Emere ka nke a dị oke mkpa ka ọrịa ọgbụgba COVID-19 mebisịrị nchekwa nri, ahaghị nhatanha, na ịda ogbenye na-eche Africa ihu.
Mgbe usoro nhọpụta ịma aka siri ike gwụchaa asọmpi ngwụcha egwuregwu na July 2021, ndị mmeri abụọ, nwanyị na nwoke nwere azụmaahịa na-emetụta ma nwee mmetụta dị egwu ga-enweta US $ 50,000 maka azụmaahịa ha. A ga-eme emume a site na onyinye nrịba ama nke Afrika.
Abụọ ndị ikpeazụ - otu nwanyị na otu nwoke ga-anọ n'ahịrị ịnata:
$ 50,000 ọ bụla maka azụmaahịa kachasị ọhụụ na nke nwere ike ịba ụba;
Tonweta ọzụzụ ga-enyere ha aka ịmalite, tolite, ma ọ bụ bulie azụmaahịa azụmaahịa agri-nri ha;
Tonweta na netwọk itinye ego;
Ohere ị ga-aga nzukọ nzukọ Green Green Forum (AGRF) iji nweta ọhụhụ;
Iji ruo eruo dị ka onye ọchụnta ego, ị ga-
Bụrụ onye dị afọ 35 ma ọ bụ n'okpuru n'okpuru ụbọchị nke ntinye aka na asọmpi ahụ
Buru onye nwe obodo (ya na njiri mara ya) site na obodo nke so na African Union
Bụrụ onye nnochi anya / onye nchoputa nke oru ị na-anọchite na asọmpi;
Enweghị akwụkwọ ndekọ mpụ metụtara nrụrụ aka, ịchụpụ ụtụ isi, enweghị ego, mpụ, ma ọ bụ mmejọ ndị ọzọ, ma ga-enye nkwupụta edebanyere na nke ahụ, ma ọ bụrụ na achọrọ.
Ka atụmatụ gị wee ruo eru, ọ ga-emerịrị
Debanye aha gị n'ụzọ iwu na obodo nke so na African Union ma ọ bụ ga-amalitela na ndebanye aha nke ụlọ ọrụ iwu dị otú a tupu 18 July 2021
Bụrụ onye isi ya na obodo ọ bụla so na Africa
Nwee nkwado ego, ma ọ bụ maka azụmaahịa na-enweghị uru ma ọ bụ nke na-enweghị uru na-ewepụta ego ma na-achọ ka ị ghara ịdabere na ego ndị na-enye onyinye
Mee ọrụ na ngalaba nri-nri na / ma ọ bụ kwado mmepe nke ngalaba nri nri site na ihe ọhụrụ ma ọ bụ mmezi usoro. Agri-nri ndi dika ndi a:
(a) Agri-food research & development
(b) Mmepụta nri bụ isi (ọrụ ugbo)
(c) Oriri na-edozi ahụ
(d) Irgba mmiri
(e) Mechanization, akpaaka, ma ọ bụ robotik, gụnyere drones
(f) Nchedo Ugbo
(g) Hydroponics ma obu ugbo ala
(h) Transportgbọ njem, nkesa, nchekwa, ma ọ bụ lọjistik
(i) Nhazi nri
(j) Nkwakọ ngwaahịa ma ọ bụ ahịa
(k) Ulo ahia ma obu oru
(l) Imebi ahihia ma obu imeghari
(m) Ngwọta / ọrụ dijitalụ ma ọ bụ teknụzụ na ngalaba agri-nri
(n) Ihe ndozi ego / oru nye ndi agri-food
(o) Mmeghari ohuru ma obu mmezi gburugburu / oru gburugburu oru ugbo
Mbụ na ihe ọhụrụ,
Ike ahia na traction,
Mmetụta mmekọrịta mmadụ na azụmahịa,
Nkwado gburugburu ebe obibi,
Tù na-akpali akpali ma na-etinye ego.
Usoro ihe omume oge
Mgbe ndị ọka iwu nyochachara ngwa, ndị ga-ahọrọ ọkara maka ajụjụ ọnụ ga-amara gị ọkwa site na Facebook na email site na 17 July 2021.
Ndị juri ga-ahọrọ ndị ikpeazụ site na 27 July 2021. A ga-agwa ndị isi isii na ndị inyom isii site na Facebook, ma ọ bụ site na email.
A ga-akpọ ndị ikpeazụ òkù ịsọ mpi n'ọsọ ịgba egwu ikpeazụ na Africa Green Revolution
Nzukọ (AGRF) nzukọ nzukọ 2021.
Ntinye mechie na Mọnde, June 14, 2021. Pịa Ebe a itinye maka GoGettaz Agripreneur Prize 2021.